आज फेरी घट्यो सुन चाँदीको मूल्य ! कति पुग्यो तोलाको ?
शुक्रबार, साउन ०२, २०७७ मा प्रकाशित
नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलाको ९२ हजार २ सय पुगेको छ । बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार (आज) एकैदिन तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबारका लागि छापावाल सुन तोलाको ९२ हजार २ सय तोकेको छ । बिहिबार तोलाको ९२ हजार ७ सयमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै, तेजावी सुनको भाउ पनि तोलाको ९१ हजार ७ सय ६० पुगेको छ । बुधबार तोलाको ९१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी चाँदीको भाउ पनि हिजोको तुलनामा तोलामा १० रुपैयाँले घटेको छ । महासंघले आजका लागि चाँदीको भाउ तोलाको ९ सय ९५ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्मबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण भारतको बनारसमा नेपालीमा माथि ज्या’दती भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमबार अयोध्या नेपालकै भूभाग रहेको र भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेको अभिव्यक्ति दिनुभएकाे थियाे ।
प्रधानमन्त्री ओलीकाे उक्त अभिव्यक्तिपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको बनारसमा भारतीय विश्व हिन्दू सेनाका कार्यकर्ताले काम गर्न गएका एक नेपालीको ज’बरज’स्ती कपाल मुण्डन गरिदिएका छन् । ती नेपालीको शिरमा जय श्रीरामको ना’रासमेत लेखिदिएका छन्।
त्यसपछि उनीहरुले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मावि’रुद्ध ना’राबाजी गरेका थिए । उनीहरुले नेपालका प्रधानमन्त्रीका वि’रुद्ध बोल्न लगाउनका साथै राम नेपालमा हैन भारतमा जन्मिएको हो भन्ने जस्ता ना’रा लगाउन लाएका थिए ।
बिहीवार साँझ हिन्दु सेनाले वनारस नदीको घाटको किनारतिर जाँदै गरेको नेपाली नागरिकलाई रोकी जबरजस्ती कपाल खौरी दिएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । यद्यपि ती व्यक्तिको परिचय भने खुलाइएको छैन ।